Muka, wachi yealamisi sekushandiswa kwevhiki | IPhone nhau
Ino nguva, mashandisiro evhiki hausi mutambo uyo, kunyangwe akawanda achifadza, zvinoyemurwa kuti vakaisa zvakare kunyorera kunoshanda zvinopfuura kungopfuura nguva nguva nenguva. Iko kunyorera kwekusimudzira kwesvondo rino hakushandire kupfuudza nguva, asi kuitonga uye kutizivisa kana tikumbira. Iko kunyorera kunodaidzwa Muka Alarm Clock uye, sezvaungave wafungidzira, inguva ye alarm.
Ndinoda kutaura kuti Wake haisi alamu yakapusa, asi handigone. Izvo zvazvinazvo izvo yazvino iOS alarm haina maitiro husiku iyo yatinogona kuisa yakatwasuka kana yakatwasuka kuti tione nguva senge pane tafura yemubhedha yemubhedha aramu wachi. Mune yambotaurwa mamiriro ehusiku tinogona kumisikidza kupenya kubva ku100% iyo iko kunyorera kunotibvumidza kuenda ku0%, inova yakasviba zvachose uye, muchokwadi, ndinofunga kuti haina basa.
Iyo imwe poindi yakasarudzika yeWake neyekuzvarwa iOS application, chokwadika, mufananidzo wayo, asi usatarisira zvakawandisa, nekuti mumufananidzo unotungamira iyi positi iwe unotova nezvose zviriko. Mune ramangwana, sekutaura kwaro kana tikatsvedza chidzitiro kumusoro, madingindira achave aripo, asi ndinotya kwazvo kuti kushandura ruvara rwedenderedzwa, kana chero aya madingindira anosanganisira, kuchabhadharwa. Isu tinogona zvakare kuona nekutsvedza kumusoro kuti kuchave neatsva maaramu masitaira mune ramangwana.
Kuti tiise alarm, tinofanirwa kutsvedza screen pasi, panguva iyoyo tinokwanisa kubata maminetsi nemaawa uye kutsvedza pawachi kumeso kuseta alarm. Izvo chaizvo zvakafanana nezvatinazvo mune yechinyakare kunyorera, asi zvirinani ndechimwe chinhu chinoonekwa zvakanyanya. Munzvimbo matinogadzirisa maaramu, tinogona zvakare kumisa / kudzima maaramu akachengetedzwa kana kuadzima nekuchengeta chigunwe paari nekuadzima pavanotanga kudedera.
Ini ndinogara ndichiti tinotora maapplication emahara patinogona uyezve tozofunga zvekuita navo. Ino nguva ini ndinozvitaurawo, asi usatarisira chero chinhu chakakosha kupfuura zvinoitwa nemamwe akawanda maaramu wachi, izvo hapana chimwe kunze kwekutipa iwe mukana wekuve newachi yakavhurika kuti uone nguva husiku.
Wake chikumbiro chinoda iOS 8.3 kana gare gare uye inowirirana neApple, iPad uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Wake Alarm Clock, wachi yekucherechedza sekushandiswa kwevhiki
Pablo mubvunzo, kureva kuti, kana ndikaisa alarm, iyo skrini inogara pahusiku hwese here? izvo hazvindiuraye nebhatiri?
Mhoro Sebastian. Iyi sarudzo. Unogona kudzima chidzitiro kana uchida. Izvo zvirimo kana iwe uchida, uye zvinokurudzirwa kuti ive ichichaja.
Maria del Carmen akadaro
Mhoro vanhu, mumwe munhu anovhara masikirini nguva dzose ??? Ndine 6 ne9.02
Pindura Maria del Carmen
Apple inoda kubhadharisa maPhones ayo neyakagadziriswa isina kuwedzera mamwe mahara